Maitiro ekugovana internet kubatika kubva ku iPhone neIOS 14 | IPhone nhau
Kwemakore mashoma, yedu iPhone rave mudziyo watinogona kuita zvirinani zvese zvinouya mupfungwa titende, kune hukuru, kune hombe nhamba yevagadziri vanoramba vachibheja pane iOS ye kuvhura kwako kuburitsa maapplication.
Uye zvakare, nekuda kwekugona kwekuti iOS inotipa kuti tigovane netiweki yeinternet kubva kune yedu iPhone, tinogona kushandisa yedu iPad, Mac, laptop, iPod kana chero chimwe chinhu chero kupi, chero bedzi mudziyo wedu uine kufukidzwa. Kana iwe usati uchiziva basa iri, pazasi isu tinokuratidza sei gadzira nzvimbo yekuwana internet kubva ku iPhone yedu.
Kana isu tichitaura nezvekugovana internet, isu tinofanirwa kutaura nezvazvo data mareti kuti vakomana veSimo vaise kwatinogona, mitengo iyo, kusiyana nevashandisi vese, yatinogona kugadzira kuti itenderane nezvatinoda, pamusoro pekutitendera kuti tiunganidze maGG kana tisingashandise mumwedzi mumwe chete.
Asi zvakare, kwemwedzi mishoma, ivo vakatipawo faibha mazinga 100 uye 300 MB symmetric, zvinopfuura kumhanya kwakaringana kusangana nezvinodiwa nechero mushandisi (kunyangwe iri mushandisi wakasimba wekushambadzira vhidhiyo masevhisi) pamitengo inodarika inokwezva uye pasina chikonzero chekuhaya nharembozha.
Asi kutanga kwezvose, unofanira tarisa kufukidza kuti uone kana uchikwanisa tora mukana wefibre rates iyo Simyo yakaisa mukushandisa kwedu.
1 Gadzira internet yekuwana poindi kubva kune iyo iPhone
1.1 Maitiro 1 - Kubva ku iPhone kuenda kune mamwe maApple madivayiri
1.2 Maitiro 2 - Kubva iPhone kune chero imwe kifaa
Gadzira internet yekuwana poindi kubva kune iyo iPhone
Maitiro 1 - Kubva ku iPhone kuenda kune mamwe maApple madivayiri
Kana iyo mudziyo watiri kuda kubatanidza iri Apple chigadzirwa (iPod, iPad kana Mac), isu tinongofanirwa kuenda kuZvirevo - Wi-Fi uye mukati Nzvimbo dzekuwana iwe pachako, tsvaga zita remudziyo wedu wobva wadzvanya pairi.
Mumuenzaniso uyu, ndeye iPhone XS Max. Nekudzvanya pane izvi, zvinobva zvango batana neinternet kubatana kweiyi iPhone, pasina kuisa password yedu, chero bedzi ID yemidziyo miviri yakafanana.
Kana zvisiri uye iyo nhoroondo yemhuri, iyo iPhone ichigovana kubatana ichagamuchira chikumbiro chekugovana kubatana.
Maitiro 2 - Kubva iPhone kune chero imwe kifaa
Kutanga, tinokwira kumusoro Zvigadziriso - YeMunhu Yekuwana Nzvimbo.
Tevere, tinya pane Peyiti yekusvika iwe pachako.
Pakupedzisira, isu takagadzirisa switch Bvumira vamwe kuti vabatanidze uye isu tinogadza password yekuwana nzvimbo yekuwana
Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, chero michina iriko yakatikomberedza inozokwanisa kuwana iyo internet yekuwana nzvimbo iyo yatakasika sekureba sekunge ziva password yatakaseta.
Kana ini ndisina kukanganisa, Apple yaive imwe yevagadziri vekutanga ve smartphone akawedzera kuita uku, mashandiro ayo mukati memakore ekutanga aive akaganhurwa nevashandisi, muganho uyo parizvino hausisiri kuburikidza neanoshanda.
Kubudirira kwatinopihwa neIOS, zvese pa iPhone uye paIpad, hazvisi zvese zviri kuchikwereti chevagadziri, nekuti Apple yakavhurawo ruoko rwayo maererano ne maitiro ekugadzirisa kuti yakapa zviripo kubva kune yekutanga iPhone uye semhedzisiro tinoiwana mumawadhi izvo zvakabva kuruoko rweIOS 14.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana internet kubatana kubva ku iPhone neIOS 14
Mhoroi, unoziva chero nzira yekugadzira nzira pfupi iyo inobvumidza iwe kumisikidza yako wega yekuwana poindi.
Apple yakabvisa mitambo ingangosvika chiuru kubva kuChina App Store mumwedzi mitanhatu yadarika